The Samsung Gear S3 nwere ike hụrụ tupu ya ngosi | Akụkọ akụrụngwa
A na-ahụ Samsung Gear S3 tupu ya egosipụta
Taa Samsung ga - eweta Gear S3 ọhụrụ, ụdị ọhụrụ nke smartwatch ya, n'ime usoro nke IFA na Berlin, ọ bụ ezie na ịgwa eziokwu na ihe omume teknụzụ agaghị amalite n'ụzọ gọọmentị ruo na Septemba 2 na-esote. Anyị amachaghị ọtụtụ nkọwa banyere atụmatụ nke ụdị ọhụrụ a nke smartwatch nke ụlọ ọrụ South Korea, mana en ikpeazụ awa ya ka a hụrụ na ọtụtụ ẹdụk oyiyi.
Na ihe oyiyi na ị pụrụ ịhụ na-ekesa ofụri ibuot anyị pụrụ ịhụ a Gear S3 ga-ịnọgide na-enwe akara malitere na Gear S2, ọ bụ ezie na-enye ya ihe ọbụna mara mma aka. Ọdịdị dị ukwuu nke ngwaọrụ ọhụrụ nwere nche ọdịnala bụ ihe ijuanya ebe ọ bụ na ị ga-ele anya nke ọma iji chọta nkọwa ọ bụla nke na-enye anyị ohere ịmara na ọ bụ smartwatch.
N'oge ahụ Samsung ekwenyeghi ma obu gọnarị ihe ọ bụla gbasara onyogho ndị a, ọ bụ ezie na SamMobile bipụtara ha, ihe dị ka ọnụ na-ekwuchitere Samsung na ebe naanị akụkọ dị ezigbo nso ma ọ bụ dabara na eziokwu pụtara. E wepuwo ihe oyiyi a maka ụlọ ọrụ Illumishness, onye na-emepụta ihe nkiri nchekwa maka ọkpụkpọ Gerar S3.
Ihe dị mma banyere okwu a bụ na anyị agaghị echere oge ọ bụla iji mara Samsung Gear S3 ọhụrụ ma gosipụta ma ọ bụrụ na ihe oyiyi ahụ dị adị ma ọ bụ na ha bụ ezigbo ọrụ na mmemme mmezi onyonyo.
Cheta na n'ehihie a, ị ga-enwe ike ịmata ihe ọmụma niile gbasara nke ọma Samsung Gear S3 ọhụrụ ozugbo ewepụtara ya n'ime usoro IFA.
Ì chere na Samsung ga-enwe ike iju anyị anya na imewe nke ọhụrụ Gear S3?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » A na-ahụ Samsung Gear S3 tupu ya egosipụta
Ndị a nwere ike ịbụ ọnụ ahịa nke iPhone 7 ọhụrụ ahụ